ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ Hello Kitty !!! - JAPO Japanese News
သော 13 Nov 2020, 13:30 ညနေ
အားလုံးသိကြတဲ့ Hello Kitty !!
ဒီဇာတ်ကောင်ဟာ ဂျပန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Sanrio ကမွေးထုတ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိချိန်ထိလည်း မူပိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါလူသိများကျော်ကြားပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လာကြပါတယ်။
ဒါကတော့ ရေခဲမုန့်ဆိုင်မှာ Hello Kitty ရဲ့ မိတ်ဆွေ Baskin Robbins နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေပါ.
Hello Kitty စပြီးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက် လက်ရှိအချိန်ထိလည်း မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကျော်လွန်သည်အထိ အချစ်ခံရတဲ့ကာရိုက်တာလေးပါ။
ဒီကုမ္ပဏီကို 辻信太郎さん（つじ　しんたろう）Shintaro Tsuji ဆိုသူကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုပဲထုတ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ စစ်ပွဲအချိန်တွင်းရက်စက်တဲ့အမှတ်တရတွေကြောင့်ပါပဲတဲ့…
၁၉၂၇ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Mr. Tsuji ဟာ စစ်ပွဲအချိန်ကကျောင်းသားပဲရှိပါသေးတယ်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက် Gunma စီရင်စုရုံးမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ Sanrio ရဲ့ အရှေ့ကျတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်လိုက်တယ်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်ကနေ စတော်ဘယ်ရီသတင်းစာ ကိုစတင်ထုတ်ဝေပြီး “ အိုးဆမ” လို့ခေါ်တဲ့ဘောပင်နာမည်နဲ့ စာတွေရေးလာပါတယ်။
သူဟာအမြဲတမ်း စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။
စစ်ပွဲအရသာကိုသိခဲ့တဲ့သူဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်နာကျည်းဝမ်းနည်းသွားရမယ့်စစ်ပွဲဆိုရင် လုံးဝခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီသတင်းစာဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နာမည်၊ နောက်ပြီး Sanrio ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးတွေကနေ စဥ်းစားလို့မရတဲ့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဆောင်းပါးတွေရေးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာကုမ္ပဏီထောင်ပြီး ထိုကုမ္ပဏီကိုကြီးထွားစေချင်တာက သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့စဥ်ဘဝပါပဲ။
သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေက သူငယ်ချင်းမွေးနေ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ…
ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသိမိတ်ဆွေ သေဆုံးသွားပြီး အားလုံးရဲ့ညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာ၊ နာကျင်မှု၊ ဆာလောင်မှု…
ဒီအရသာကိုပေးတဲ့စစ်ပွဲကို လုံးဝခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။ စစ်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ
စတော်ဘယ်ရီအိုးဆမ (Hello Kitty) ထံမှသတင်းစကားကို ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုရေးပြီး ပို့လိုက်ပါတယ်။
စစ်ပွဲဟာ လူများစွာရဲ့အသက်ကိုနုတ်ယူတယ်၊ လူများစွာကိုနာကျည်းစေတယ်၊ ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ, ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ရာစုပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားလည်း မပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ဘူး။
အဲ့ဒီအချိန် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားပဲရှိသေးတဲ့ အိုးဆမ(မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်း)ဟာ ဒီစစ်ပွဲမှာ အတန်းဖော်အနည်းငယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်.
ဒီအတွေ့အကြုံကနေ နှလုံးသားထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးထွင်းသွားတဲ့အရာကတော့ “ စစ်ပွဲကနေဘာမှ မမွေးဖွားလာနိုင်ဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု၊ လူမျိုးတစ်စုနဲ့တစ်စု၊ လူချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ အပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဘဲ၊ သင့်မြတ်ပြီးကူညီသွားဖို့က တကယ့်အရေးကြီးဆုံးအရာပဲ” ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၈ လပိုင်းဆိုတာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အနုမြူဗုံးဂျပန်ပြည်ပေါ်ကျပြီး၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအတိတ်ရှိခဲ့တဲ့ လပဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ပွဲရဲ့အဓိပ္ပါယ်မဲ့ခြင်း၊ ရက်စက်ခြင်းကိုမမေ့ဘဲ၊ သင့်မြတ်စွာရိုင်းပင်းကူညီပြီး အသက်ရှင်သွားခြင်းရဲ့ အရေးကြီးမှုကို ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လူတိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သင့်မြတ်ကြပြီး၊ ဒုက္ခရောက်နေသူအား ကူညီပေးတတ်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ ငြိမ်းချမ်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြမယ်လို့ အိုးဆမဟာ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့မျှောင်လင့်ပါတယ်။
Tsuji စံဟာ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုပြုရုံသာမက၊ ကလေးတွေရဲ့အပြုံးကိုဖန်တီးခြင်းက သူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနှလုံးသားမျိုး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီး၊ စစ်ပွဲတွေပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆို အကောင်းဆုံးပဲနော်….
Gundam နဲ့ Hello Kitty တို့ရဲ့တိုက်ပွဲ
Horse oil baby cream
လိင်ဝန်ဆောင်မှုယူပြီး ပိုက်ဆံမပေးတဲ့အမျိုးသားများကို အဲဒိုခေတ်မှာဒီလိုအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။